TALATA 2 MARTSA 2021
FILOHAM-PIRENENA TANY MAHAJANGA : Tsy nitsahatra namely akaiky ireo mpanohitra azy
Mihazakazaka ho amin’ny fampielezan-kevitra. Naresaka ny tao an-drenivohitry ny Faritr’i Boeny, ny faran’ny herinandro lasa teo. 28 novembre 2017
Rakotra olon’ny Hvm ny tanàna, ankoatra ny fihaonam-bem-paritra dia nahavita nitokana fotodrafitrasa maro sosona tao anatin’ny fotoana fohy ihany koa ny filoham-pirenena.
Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony dia tsy nitsahatra namely akaiky ireo mpanohitra ny tenany. Tahaka ny efa fanaon’ny filoha hatramin’izay dia nitohy hatrany ny pi-maso nataony ho an’ireo antoko mpanohitra. Nolazainy tamin’izany fa amin’ny alalan’ny asa no tokony hifaninanana ary tsy tokony hampiasain’ny mpanao politika ho fitaovana ny vahoaka.
“Tsy ho vitantsika ao anatin’ny iray andro ny lalam-pampandrosoana ny firenena. Mandainga izay milaza fa vitany vetivety io, nefa nanao ary izy tsy nahavita. Isika no manomboka, isika no manarina, isika no manatsara ny tsy vita rehetra”, hoy ny ampahany tamin’ny kabarin’ny Filoham-pirenena tany Mahajanga. Manangasanga any sahady ny fampielezan-kevitra sy ny fambaboana ny fom-bahoaka hifidy ny olon’ny Hvm amin’ny fifidianana 2018.
Nandritra io fihaonam-ben’ny Hvm tany Mahajanga io ihany koa no nilazan’ny filohan’ny antoko, Rivo Rakotovao fa ny filoham- pirenena ankehitriny ihany no atolotr’izy ireo ho kandida amin’ny fifidianana. Tany am-boalohany dia efa mazava ny paikady sy ny politika maloton’ireo mpitondra, tamin’ny alalan’ireo tetika rehetra napetrak’izy ireo hatrany am-boalohany, toy ny fikasana hanova ny lalàm-panorenana sy ny nanendrena an’i Rivo Rakotovao ho loholona dia hita mazava ny lalana tian’izy ireo ahatongavana. Manoloana ny toe-java-misy eto amin’ny firenena ankehitriny dia maro ireo antoko politika no nitondra ny fanehoan-keviny.
Anisan’izany ny Vami (Vahoaka Miray) sy ny Akfm, ireto farany dia samy nilaza fa raha tena fifidianana madio sy mangarahana no misy eto dia tsy ho lanim-bahoaka intsony izay kandidan’ny Hvm eo. Ireto farany anefa manao izay ho afany amin’ny fambaboana ny fom-bahoaka sy ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana etsy sy ero.
Mivoy resa-poko sy fankahalana ny filohan’ ny oniversiten’i Toamasina sy ny ekipany RAHARAHA BARIKADIMY (4648) 25 février 2021 Hivadika ho “tolona” ny tatitry ny Depiote Tim MIKATSAKA FANDATSAHAN-DRA (231) 25 février 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (143) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (137) 2 mars 2021 Handray andraikitra hatrany hisorohana izay rehetra mety ho fanakorontanana EMMO/NAT (78) 25 février 2021 « Hatao laharam-pahamehana ny fampianarana » FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA (70) 25 février 2021